यस्तो हुन सक्यो भने पृथ्वीका प्रत्येक मानिस अरबपति हुन्छन् ! – Ujyaalo Patrika
के तपाईं पत्याउनु हुन्छ पृथ्वीका प्रत्येक मानिस अरब हुन सक्छन् ! केही गाह्रो छैन। क्षमा गर्नु होला यो कुनै राजनैतिक दर्शन, वाद, सिद्धान्त अथवा राजनैतिक व्यवस्थाले होइन, विज्ञानबाट मात्रै सम्भव छ।
सुन एउटा धातु हो, जुन पृथ्वीको गर्भबाट निस्किन्छ। पृथ्वीको गर्भमा यस्ता अनेकौं धातु छन्। हुन त सुन मात्रै किन तपाईंको घर- खेतमा फलाम, कोइला अथवा जुनसुकै धातुको प्रचुर मात्रामा मौज्दात भेटियो भने अरब हुने सपना साकार हुन्छ। तर, सुनको भने महिमा नै बेग्लै … तपाईं बुझ्नु हुन्छ, होइन र ! सीधा र सत्य कुरा हो, सुनको व्यवस्थापन गर्न अरु धातुको तुलनामा सजिलो हुन्छ। विज्ञानमा रूचि भएका पाठकहरुलाई थाहा नै छ– एउटा धातुबाट अर्को धातु बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि धातुको एटममा रहेका इलेक्ट्रानको व्यवस्थापन नै हो फरक फरक धातु हुने कारण। तिनका इलेक्ट्रानको संयोजन बदलिएर कुनै पनि धातुबाट अर्को धातु बनाउन सकिन्छ। अर्थात फलामबाट सुन बनाउन सकिन्छ। सुनबाट फलाम पनि… ओहो के लेखेछु, कसले पो यस्तो रहर गर्ला !
अब संसार ‘गोल्ड पीक’का छेउछाउ पुगेको खबरले तपाईंलाई अलि कति भए पनि सन्तोष गराउँछ होला। ‘गोल्ड पीक’ भनेको अब पृथ्वीको गर्भमा रहेको सुनको मात्रा कम हुँदै गइरहेको जनाउँछ। अर्थात् अब विस्तारै सुनका खानी रित्तिँदै गइरहेका छन। ‘वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल’ (WGC) का अनुसार वर्ष २०१९ मा संसारभरि धरतीको छाती विदीर्ण गरी ३,५३१ टन सुन दोहन गरियो। विश्वका नामुद सुन उत्खनन कम्पनीहरुका अनुसार पृथ्वीको छातीमा रहेको कुल सुनको तीन चौथाई सुन दोहन भएर मानिसको शरीर -घर-बैंकमा पुगिसकेको छ। विचार गरी हेर्नुस् है पृथ्वीभित्र रहेको कुल सुनको तीन चौथाई सुन झिकिँदासम्म तपाईंको भागमा कति पर्न आएको छ ?
यसका लागि विज्ञानका आँखा झण्डै ५०-५५ करोड किमी टाढा अन्तरिक्षमा केन्द्रित भएका छन्। पृथ्वी भन्दा ‘नेक्स्ट’ ग्रह (सूर्यसंग अवस्थितिको आधारमा ) मंगल हो। यसको पृथ्वीसंग दूरी सरदर २२,५००००० किमी छ (नजीक हुँदा यो दूरी ७,७७,९२००० र टाढा हुँदा दूरी बढेर ४०,१००००० किमी सम्म हुन्छ )। मंगलपछिको अर्को ग्रह बृहस्पति हो। बृहस्पति र मंगलबीचको ‘स्पेस’मा अनेकौं खगोलीय पिण्डको उपस्थिति छ। यी पिण्डलाई क्षुद्रग्रह (ऐस्टेरॉयड ) भनिन्छ। मंगल र बृहस्पति ग्रहको ‘स्पेस’मा रहेका लाखो ऐस्टेरॉयड क्षेत्रलाई ऐस्टेरॉयड क्षेत्र ( ऐस्टेरॉयड बेल्ट ) भनिन्छ। यहाँ रहेका ऐस्टेरॉयडसम्म विज्ञानका यान पुगिसकेका छन्। अमेरिका र जापानले यहाँ पुगेर ऐस्टेरॉयडको उत्खनन गरेर ‘नमूना’ ल्याइसकेका छन्। यही ऐस्टेरॉयड बेल्टमा एउटा यस्तो ऐस्टेरॉयड छ, जसको संरचनामा प्रचुर मात्रामा बहुमूल्य धातु जस्तै सुन -प्लेटिनम -फलाम -निकल रहेका छन्। प्रचुर मात्रामा सुन रहेको यस ऐस्टेरॉयडको आकार (व्यास ) २२६ किमी रहेको छ।
Next यो हो सुनले बनेको संसारकै पहिलो पाँचतारे होटल(फोटोसहित)